५ बर्ष देखि फ्लप शाहरुख, बनाउला त 'जिराे'ले शाहरुखलाई पुनः हिराे ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
५ बर्ष देखि फ्लप शाहरुख, बनाउला त ‘जिराे’ले शाहरुखलाई पुनः हिराे ?
बलिउडका बादशाह किङ अफ राेमान्स भनेर चिनिने शाहरुख खानकाे अन्तिम सुपरहिट फिल्म खाेज्ने हाे भने साल २०१३ मा पुगिन्छ । जहाँ उनले अाफ्नाे करिअरकाे सबैभन्दा उत्कृष्ट फिल्म खेलेका थिए । २०१३ मा अाएकाे उनकाे चेन्नइ एक्सप्रेस नै अहिले सम्मकाे सबैभन्दा हिट फिल्म साबित भएकाे छ उनकाे ।
२०१३ पछि पनि लगातार फिल्ममा व्यस्त रहेपनि उनका फिल्मले सामान्य व्यापार भन्दा अरु कमाउन सकेन । त्यहीँ अर्का दुई खान अामिर र सलमानले भने लगातार धमाकेदार फिल्म दिइरहेका छन् । यसै वर्ष अाउने शाहरुखकाे फिल्म जिराे ले भने उनकाे फिल्म यात्रालाई पुनः पहिले जस्तै रफ्तारमा अघि बढाउने अनुमान धेरैले गरेका छन् ।
यदि उनकाे फिल्म जिराेले भव्य कमाइ गर्याे भने उनकाे जवरदस्त कमब्याक भन्न सकिन्छ भने कमाइ गरेन भने उनकाे फ्लप यात्रा क्रमश जानेछ । उसाे त फिल्म जिराेलाई दुई फरक दृष्टिकाेणले व्याख्या गरिँदैछ । याे बलिउडमा एकदमै नयाँ धारकाे फिल्म भएकाले कसैले याे फिल्म काेसेढुङ्गाे सावित हुने तर्क गर्छन् भने कसैले नयाँ धारकाे फिल्म बलिउडलाई नफाप्ने भन्दै फिल्म डुब्ने तर्क राख्छन् ।यस्ताेमा अब फिल्मले कस्ताे व्यापार गर्छ त्याे त फिल्म अाएपछि मात्र थाहा हाेला ।
बलिउडका सुभचिन्तक र शाहरुखका फ्यानलाई भने फिल्म चले हु्न्थ्याे भन्ने लागेकाे छ ।
वरुण र अनुष्काकाे मित्रतामा अर्जुन र रणवीर भीलेन !
प्रियंका चोपडा यसकारण सलमान खान फकाउँदै
क्यान्सरसँग लडिरहेकी साेनालीलाई सम्झेर राेए यी कलाकार !
रणवीर र दिपिका वैवाहिक सम्बन्धमा बाँदिदै !
अब खाेला तर्दा कर तिर्नुपर्ने !
भारतले नेपाललाइ दियाे ३० वटा एम्बुलेन्स र ६ वटा स्कुल बस
भवन निर्माणमा लागि पाँचदेखि १५ करोडसम्म
दुषित पानी बेच्नेलाई कारवाही र मौलिक अधिकार संरक्षणको कानून बनाउन मन्त्री मगरको निर्देशन